Victoria House Resort & Spa Belize: Fialan-tsasatra farany amin'ny Thanksgiving Holiday
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Victoria House Resort & Spa Belize: Fialan-tsasatra farany amin'ny Thanksgiving Holiday
Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Victoria House Resort & Spa, Belize, toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina nahazo mari-pankasitrahana ao amin'ny lehibe indrindra amin'ireo nosy Belizean any ivelany, Ambergris Caye, dia mirehareha manolotra ireo singa ilaina amin'ny fialan-tsasatra amin'ny Thanksgiving 2021 tonga lafatra. Ho fanampin'ny trano fonenana voalamina tsara, ny Victoria House Resort & Spa dia manolotra hetsika sy aventure maro, fitsaboana spa miala voly, ary ho an'ny Thanksgiving tsy hay hadinoina indrindra any amin'ny paradisa, sakafo telo mianadahy.
Ny vahiny dia afaka mankafy fety Thanksgiving izay noforonin'ny chef miaraka amin'ny tsiron-tsakafo matsiro indrindra.
Afaka miandrandra ny hitsidika ireo zava-mitranga ao amin'ny nosy amin'ny toetr'andro mahavariana any Belize ny mpizaha tany.
Any Ambergris Caye, 75°F eo ho eo ny mari-pana, ka mahatonga ny toerana mafana amin'ny toetr'andro ho safidy tsara indrindra ho an'ireo mpandeha misoroka ny manga ririnina.
"Safidy tsara ho an'izay mitady toerana fisaorana tsy misy adin-tsaina amin'ity taona ity ny toeram-pialan-tsasatray ho an'ny fianakavianay," hoy izy. Victoria House Resort & Spa Tale Jeneraly, Janet Woollam. “Ankoatra ny fankafizana ny fetin'ny Thanksgiving izay noforonin'ny chefs miaraka amin'ny tsiron'ny fararano matsiro indrindra, ny mpandeha dia afaka miandrandra ny hitsidika ireo zava-mitranga ao amin'ny nosy amin'ny toetr'andro mahavariana any Belize amin'ny Novambra.
Ny mari-pana amin'ny volana Novambra ao Ambergris Caye - iray amin'ireo nosy tsara tarehy indrindra any Belize, 35 kilaometatra miala ny tanànan'i Belize - dia eo ho eo amin'ny 75 ° F, ka mahatonga ny toerana mafana amin'ny toetr'andro ho safidy tsara indrindra ho an'ny mpandeha misoroka ny ririnina manga.
"Aorian'ny fialofana maharitra amin'ny toerana sy ny fiasana ao an-trano, dia ho faly ny vahiny hahita ity toerana mahafinaritra ity, izay ahafahan'izy ireo mankafy ny andro masoandro sy ny lanitra manga, ary miala sasatra amin'ny dobo filomanosana, snorkel, trondro, na antsitrika scuba," hoy i Woollam. “Victoria House Resort & Spa dia toerana manokana mba hanesorana ny toe-tsain’ny fotoam-pialan-tsasatra, ary tsy andrinay ny fandraisana ireo vahiny ao amin’ilay fananan’ny nosy.”
Miaraka amin'ny dobo tsy manam-petra, tora-pasika manokana, fitsangatsanganana eny an-toerana ary Fantasea Dive Shop voamarina amin'ny PADI, ny Victoria House Resort & Spa dia manome ny fifandanjana tonga lafatra: tontolo milamina izay ahafahan'ny vahiny mankafy fialan-tsasatra tanteraka ary koa karazana aventure mahafinaritra ho an'ny ny fianakaviana manontolo. Ho fanampin'ny hetsika toy ny bisikileta, ny kayak, ny fiantsenana, ny snorkeling, ary ny jono, ny vahiny dia afaka mijery ny tempolin'ny Maya fahiny, mandehandeha amin'ny zip-lining amin'ny ala mikitroka feno gidro Black Howler mahafinaritra, manatevin-daharana ny fitsangatsanganana ala tropikaly, na mitsidika ny Lova Iraisam-pirenena. haran-dranomasina ho an'ny traikefa antsitrika miavaka.
Ny trano fandraisam-bahiny amin'ny kilasy manerantany dia manome tontolo tonga lafatra hialana sy hialana sasatra aorian'ny andro fitsidihany, na misafidy ireo villa irery miaraka amin'ny dobo manokana natao ho an'ny vondrona kely sy fianakaviana, ny Casitas tropikaly, ny villa amin'ny ranomasina, na ny efitrano voaravaka tsara ao anaty trano iray. trano misy rihana roa amin'ny fomba fanjanahantany. Ny Victoria House Resort & Spa koa dia mirehareha amin'ny fanasongadinana a spa fanompoana feno trano fanatanjahan-tena ary koa toeram-pisakafoanana mahandro telo samy hafa isaky ny tranga.
Nalaza tamin'ny fanomanana hazan-dranomasina sy sakafo tsara kalitao miaraka amin'ny fiompiana eo an-toerana, ny ekipan'ny culinary Victoria House Resort dia nanomana sakafo manokana ho an'ny Thanksgiving, manomboka amin'ny safidy roa ho an'ny sakafo voalohany: a salady poara miaraka amin'ny fennel, voanjo, voaloboka, ary fromazy manga, na avo lenta lasopy ginger karaoty miaraka amin'ny kibon'ny henan-kisoa, radish nendasina, ary paoma caramelized. Ho an'ny taranja faharoa dia hanana safidy ny vahiny pasta vita an-trano feno tantely ricotta sy sage ary aroso miaraka amin'ny ragu zanak'ondry manitra, fillet snapper vaovao voaomana amin'ny zava-manitra sy saosy yaorta kôkômbra tangy, na tratra vorontsiloza aroso miaraka amin'ny casserole tsaramaso maitso sy vomanga mamy miaraka amin'ny fromazy osy. Pudding toffee mipetaka aroso miaraka amin'ny gelato lavanila sy saosy karamel bourbon mahafa-po no hameno ny sakafo amin'ny fety.
Azo idirana amin'ny alàlan'ny sidina commuter 15 minitra avy any Belize City, ny Victoria House Resort dia mahatonga azy ho mora ny manomana fety tokana amin'ny toerana hafahafa amin'ity taona ity.
Momba ny Victoria House Resort & Spa
Any Belize ao amin'ny Ambergris Caye, no lehibe indrindra amin'ireo Nosy Belizean any ivelany, ny Victoria House dia roa kilaometatra atsimon'ny tanànan'i San Pedro tsara tarehy. Ny toeram-pialan-tsasatra dia manolotra tsiron'ny hakantony tsy nikiraro izay mitazona ny vahiny hiverina bebe kokoa, miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 42 manomboka amin'ny endrika casitas tafo bozaka mankany amin'ny villa amoron-dranomasina misy dobo manokana, efitrano misy toeram-pambolena, ary trano fandraisam-bahiny. Ny Restaurant Palmilla sy ny Bar's Admiral Nelson dia malaza amin'ny sakafo sy zava-pisotro tsara ankasitrahana amin'ny serivisy miavaka sy manokana. Nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena sy loka avy amin'ireo fikambanana malaza toa an'i Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens ny fifantohana amin'ny antsipiriany avy amin'ny mpiasa sy ny mpitantana. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady Victoria-house.com.